ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၏ အမှားပြင်ဆင်ချက်များ လူရယ်စရာဖြစ်နေ | New Generation For Free Burma Media
← ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဂုဏ်ထူးဆောင် ဧကရီဆု ပေးမည်
မြောက်ဥက္ကလာနှင့် သင်္ဃန်းကျွန်း မြို့နယ်များကို ရေဖြတ် →
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တဦးချင်းစီ၏ ဆန္ဒမဲရရှိမှု အခြေအနေများ ကြေညာ ရာတွင် ကိန်းဂဏန်း အချက်အလက်များ မှားယွင်းဖော်ပြခဲ့သဖြင့် အမှားပြင်ဆင်ချက်များ နေ့စဉ် ထုတ်ပြန်နေသောကြောင့် ဖတ်ရှုရသည့် ပြည်သူများမှာ ဟာသ အဖြစ် ပြောဆို ရယ်မောနေကြကြောင်း ကြားသိရသည်။
စစ်အစိုးရပိုင် သတင်းစာများတွင် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က ဆန္ဒမဲပေးနိုင်သူ အရေအတွက်များ မှားယွင်း ဖော်ပြခြင်း၊ ပယ်ဖျက်ထားသော မဲဆန္ဒနယ် များတွင် ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ (ကြံ့ဖွံ့ပါတီ) ၏ လွှတ်တော် အမတ်လောင်းများက ပြိုင်ဘက်မရှိ အနိုင်ရသည့်ပုံစံ ထည့်သွင်း ဖော်ပြခြင်း၊ မဲဆန္ဒနယ်တချို့တွင် မဲပေးသူ ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း ကျော် ရှိသည်ဟု ဖော်ပြခဲ့ခြင်း အပါအ၀င် အမှားအယွင်းများ ဆက်တိုက် ကြေညာ၍ အမှားပြင်ဆင်ချက်များကို ပြန်လည် ထည့်သွင်းခဲ့သည်။
“ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဆိုတာ နိုင်ငံတော်ရဲ့ အစိုးရ တရပ် အသစ်ပေါ်ထွန်းဖို့ ပဲ့ကိုင် ပေးနေရတဲ့ အဖွဲ့ အစည်း။ အဲဒီ အဖွဲ့အစည်းက အချက်အလက် အလွဲအမှားတွေ ကြေညာတယ်ဆိုတာ သူတို့ မဟုတ်တာ လုပ်တယ် ဆိုတာတွေကို ပေါ်လွင်စေတာပေါ့” ဟု နိုင်ငံရေးပါတီတခု မှ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ရှုံးနိမ့်ထားသည့် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း တဦးက ပြောသည်။
ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က နိုဝင်ဘာလ ၁၆ ရက်နေ့ထုတ် အစိုးရပိုင် သတင်းစာများထဲတွင် တောင်ငူ မဲဆန္ဒနယ် ၁ ၌ မဲဆန္ဒရှင်ဦးရေ ၇၄၆၄၅ ဦး၊ ၁၀၂. ၀၉ ရာခိုင်နှုန်းဟု မှားယွင်း ဖော်ပြခဲ့ပြီးမှ နောက်တနေ့တွင် မဲဆန္ဒရှင် ဦးရေ အမှန်မှာ ၇၆၅၃၅ ဦး ဖြစ်ကြောင်း၊ ရာခိုင်နှုန်းမှာလည်း ၉၉. ၅၇ ဖြစ်ကြောင်း ပြင်ဆင်ဖတ်ရှုပါရန် ပြန်လည် ဖော်ပြခဲ့သည်။
“ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က လိမ်တာတောင် ယုတ္တိရှိရှိ မလိမ်တတ်ဘူး။ မဲပေးသူရာခိုင်နှုန်းက ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းထက် ကျော်နေ တယ်။ မဲပေးသူအားလုံး မဲလာပေးတဲ့အပြင် ပိုတောင် ပိုနေသေးတယ်လို့ ပြောနေသလိုပဲ။ တော်တော် ဟာသမြောက်တယ်” ဟု ရန်ကုန် ဒေသခံတဦးက ပြောသည်။
၆.၅၁ အစား ၆၅.၀၉ ဟု လည်းကောင်း၊ ဒဂုံမြို့သစ် (တောင်ပိုင်း) မဲဆန္ဒနယ် ၂ မဲဆန္ဒရှင်ဦးရေ ၈၆၇၉၅၆ အစား ၁၀၂၈၆၄ ဟုလည်းကောင်း၊ မဲပေးသူ ရာခိုင်နှုန်း ၈.၁၅ အစား ၆၈.၇၉ ဟုလည်းကောင်း ပြင်ဆင်ဖတ်ရှုပါရန် ဖော်ပြထားသည်။
ရန်ကုန် တက္ကသိုလ် ကျောင်းဆရာတဦးကမူ “ကြံ့ဖွံ့ပါတီရဲ့ အောင်မြင်မှုက အံ့မခန်းပဲ။ နိုင်ငံတကာနဲ့ ယှဉ်ရင် ဂင်းနစ် စံချိန်တင်လောက်တယ်။ ပြီးတော့ ဘယ်နိုင်ငံမှာမှ မရှိတဲ့ ကြိုတင်မဲပေး စနစ်မျိုး ဒီမှာ ရှိနေတာကလည်း အရမ်းထူးခြားတယ်။
ကြံ့ဖွံ့ပါတီသည် ရွေးကောက်ပွဲတွင် မဲလိမ်မဲခိုးမှုများ၊ ကြိုတင်မဲများဖြင့် အမတ်နေရာ အများဆုံး အနိုင် ရရှိခဲ့ပြီးနောက် နိုင်ငံရေးပါတီတချို့က မဲမသမာမှုများကို ဖော်ထုတ်ပြီး ကြံ့ဖွံ့ပါတီနှင့် ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ကို ဥပဒေကြောင်း အရ တရားစွဲဆိုရန် ပြင်ဆင်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။